Kuwa ku guuleysta 7 Wicirada dabiiciga ah - Geofumed
Kuwa ku guuleysta 7 Wicers Natural
Nofeembar, 2011 Internet iyo Blogs, dhowr
Sida lagu dhawaaqay, 11 / 11 / 11 waxay ku dhawaaqday quruxda dabiiciga ah ee 7; inkasta oo ay tahay bilaa hordhac ah sababtoo ah tirinta rasmiga ah ayaa qaadan doonta maalmo yar, isbedelka suuragal ah in laga yareeyo waxna isbeddeli mayso. Maqaalkaan, waxaan rumaysanahay Waxay noqon doontaa mawduucan ugu dambeeya ee mawduucan diyaar u ah iyada oo aan lagama maarmaanka u lahayn amar ah mudnaanta koowaad, halkii ay sameysmi lahayd falanqayn dhameystiran oo qaaradda ah.
Nidaamkani wuxuu bilawday 2007 sannadkii la soo magacaabay 440 oo dadku sameeyay, laga bilaabo wadamada 220 ee adduunka oo dhan. Kuwa helay codadkii ugu badnaa oo ah ayaa sidoo kale diiwaan by dalalka ay ka soo jeedaan, ayaa ka wadar ahaan 77 xulay xiriir 10 ah: 1 iyo ugu dambayntii ka dhigaya wax yar ka badan hal sanno ayaa la doortay 28 xiriir 4 ah: 1, kuwaas oo kaliya 7 ayaa la dooran lahaa.
Waxaa jiray isbeddel yar oo geedi socodka qorsheysan, sanadii u dambeeyey ee u adeegaysay si ay u muujiso isbeddellada iyo xoojinta cod bixinta; Waqtigaas 14 waxaa lagu dhawaaqay in ay si weyn u socoto.
Waxaan billaabay saadaasheyda markii ay 28 ku guuleysteen finalka; 7 3 aan u xaq u helay: Waxaan u suurtagashay in ay saadaal wanaagsan laba ka mid ah Asia iyo South America Forest Amazon ah. qaar ka mid ah fikradaha ee saameynta ay meelaha la helitaanka Internet weyn aan sidoo kale heer qaar ka mid ah guul iyo arxandarro ah wadamada horumariyo in maalin maalmaha ka mid ayaan ku xusan ... halaagsameen tago Europe iyo Maraykanka oo aan ka qayb Nolol yar.
Qaar ka mid ah qaarada Aasiya (3 ku guuleystey)
Tani waxay ahayd qaaradda oo ka qaybqaadashadii ugu weynayd; oo ka mid ah musharaxiinta 9 ay u suurtagashay inay dhigto 3. Waxyaabadu waxay ahayd daqiiqad aad u wanaagsan oo ku saabsan meeraha meeraha ee aan ugu yaraan ogayn Hispanics; sidoo kale xilliga wanaagsan ee isku xirnaanshaha ee ku nool dalalka sida weyn ee Shiinaha iyo Hindiya, ugu dambayntii waa inaan qiranno in labada qof ee ku guuleysta ay u taagan yihiin mucjiso sharaf leh.
Halong Bay Waxay ku taallaa in Quang Ninh, Vietnam, waa lanooga cajiib ah oo qaababka dhulka, boholaha iyo harooyinka gudaha ee 1,553 1969 kiiloomitir oo laba jibbaaran oo Islets.
Wabiga dhulka hoostiisa ee Puerto Princesa. Midkani wuxuu ku yaalaa Palawan, Philippines. In ka badan 8 kilomitir oo webiga la marin karo oo ka hooseysa buur, taas oo ka dhigan qaabka ugu weyn ee isku-dhafka iyo dhuumaha.
Jeju Island In South Korea, waa formation a Kobenhagen ee marno 360, ka mid ah taas oo taaj oo kale ah la sameeyay by bohol ka mid ah yeedhay Hallasen hurda. Waxay u egtahay mid yar laakiin waa mitirada 1950 oo ka sarreysa heerka badda.
Qaar ka mid ah qaarada Ameerika (2 ku guuleystey)
Of finalka 7 u suurtagashay in ay qabtaan laba, in kastoo halkan kala soocin la siiyey in soo jeedinta la wadaago dalalka Southern koorta dhowr, oo ay ku jiraan Brazil nool xilligan gaar ah oo ku saabsan habka ay u noqon xoog ah in mudada dhexe iyo halka uu xiska ee dowladda waxay fahamsan tahay waxa ay ka dhigan tahay in lagu dhiirigeliyo waxa aad leedahay si loo yareeyo xaddidaadaha xun (taas oo badanaa badanaa).
Amazon Rainforest Tani waxa ay ahayd tiirka la fahmi karo, qayb ahaan sababtoo ah waa 7 million kiiloomitir oo laba jibbaaran la wadaago dalalka 9, oo ay ku jiraan a heybad badan netizen; sidoo kale sababtoo ah waa calaamad muujinaysa miyir-beel caalami ah oo aan si xun uga lumi karno daqiiqad kasta.
Iguazu Falls. Anigu ma aan sharadin, isaga oo ka fakaraya in Colorado Canyon ay ku guuleysan doonto. Laakiin ma ahan farxad waxaa jira arintaan ku dhawaad ​​2 mugdi dherer ah oo u dhaxaysa Misiones (Argentina) iyo Paraná (Brazil).
Oceania (1 ku guuleystay)
7 finalists ayaa si dhib yar u guuleystay hal barbaro. Halkan waxaan ku qiyaasey xayawaanka raaxada ah, laakiin mawduuc ka soo horjeeda in ay si ballaaran u faafisay hay'adaha ka soo horjeeda ee gobalka.
Komodo Park. In Indonesia, waxaa laga yaabaa in masduulaagii ay naga yaqaanaan noo, taas oo ah sababta park this lagu dallacsiiyay 1980. Inkasta oo wadarta guud ahaan ay ka mid yihiin kooxo jasiirado ah oo asal ahaan ka soo jeeda waqooyiga oo ku daraya in ka badan 600 Square Square.
Qaarada Afrika (1 ku guuleystey)
Iyadoo laba magacood oo keliya, ayuu mid ku guuleystay. Waxaan sugayay Kilimanjaro, laakiin waxaa saameyn ku yeeshay dad badan oo xidhiidhsan oo ku xiran Koonfurta Afrika, taas oo habkan loo maareynayo awoodda adduunka ee muddada dhexe.
Buurta Miisaanka. Cadaalad daro ah oo ku taal buurta sare ee Cape Town, Koonfur Afrika. Waa hagaagsan yahay dalxiiska dalxiiska, fuulitaanka iyo baabuurta telefishanka ayaa ka dhigay mid caan ah.
Qaar ka mid ah qaarada yurub iyo Mareykanka ayaa ah kuwa maqan
Waxay caddaynaysaa mawqifka mashaariicda horumarineed ee adduunka (United States iyo Europe) oo ku saabsan arxandarro sababtoo ah arrimaha ay u arkaan cheesy; halka gawaarida iyo wadamada soo koraya ay ku dhaqmayaan waddan wadani ah. Waxa suurto gal ah ayaa u safray meelahan, aad si cad u ogaadaan ka khayr badan meelo dalka iyaga u gaar ah, si aad qalbiga ka yar jebiyaan oo ka codayn si caddaalad ah. Lakiin ma ahan inaad iska indho tiri karno in qaar ka mid ah warbaahinta ka mid ah gobollada tan iyo bilowgii warsan mercantilism xilli ciyaareedkan, iska indha-tiray qiimaha guud ahaan in dadaallada noocaas ah ku biiriyaan dhaqanka iyo wacyi-ilaalinta ee caalamka, taas oo ka soo horjeeda dedaaladii weynaa ee ay samaysay dalalkaas horumaray si ay uga hortagaan kuleylka caalamiga ah.
Dhab ahaantii waxay lahaan lahayd natiijooyin kala duwan haddii ay ahayd qorshe Qaramada Midoobay, National Geographic ama hay'ad kale oo leh garasho dheeraad ah oo ku jirta xaaladdan.
Xaaladdu waa sida Maraykanka, halkaas oo muwaadiniinta ay ka baqayaan in ay arkaan inta hargab ee ku jira codka madow, waxay qaadeen sanado 30 si ay u gaaraan dhererkaas iyo sanad ay ku dhinteen sababtoo ah la'aanta qoyaan la'aanta; markaad ka aragto hawada aad fahamsan tahay in dhibco madow aysan aheyn dayrta ... waxay si fudud u qiyaasaan caymiska dhulgariirka muddada gaaban.
Laakiin wakhtiga wanaagsan ee 7 yaababka dabiiciga ah.
Post Previous«Previous Xaaladda Nederlandiga ah, oo ka tarjumaysa Latin American ah
Post Next Qorshaha Maamulka Degdegga ah (GEMS) doorteen gvSIGNext »